5 နေ့အီတလီနိုင်ငံ Explore ရန်ရောမမြို့ မှစ. Trips | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5နေ့အီတလီနိုင်ငံ Explore ရန်ရောမမြို့ မှစ. Trips
ရောမမြို့တစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့ဖြစ်၏, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးခရီးသွားအမျိုးမျိုးတစ်နည်းနည်းမနှောမြော. ရှည်လျားသောအလုံအလောက်ကဧရိယာတဝိုက်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်စူးစမ်းဖို့ရောမမွို့ရှိနေဖို့သူများသည်, လွန်း. ကံကောင်းစွာ, ထိုနေ့ရက်သည်ခရီးစဉ်များအတွက်များမှာကားအဘယ်သို့! ရောမမြို့အများဆုံးသောနေရာများနှင့်အတူရထားဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်စဉ်းစား, အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ရှိရာသွားကြဖို့ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, အကြှနျုပျတို့သညျ့ပြုပါကကူညီမယ့်စာရင်းကိုပြင်ဆင်ကြပြီ. ဒီမှာပါ5အီတလီကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ရောမမြို့မှတစ်ခေါက်ခရီးစဉ် မည်သည့်ခရီးသွားမဆိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်!
1. Ostia Antica စေရန်တစ်ဦးကနေ့ခရီးစဉ်
Ostia Antica 30km န်းကျင်တစ်ခုရှေးခေတ်အခြေချဝေးရောမမြို့ကနေ. နောက်ကျောရှေးဟောင်းတို့လက်ထက်၌, ဒီမြို့ရောမမြို့၏အဓိကဆိပ်ကမ်းကိုကြီးကဒီမှာကြည့်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအဆင်းလှ Mosaic နှင့်အတူအများပြည်သူဗတ်ကြည့်ယူနိုင်ပါသည်.
ထို့အပွငျ, အဆိုပါပွဲကြည့်စင်နှင့်အဓိကလမ်းလည်းရှိပါတယ်. အပျက်အယွင်းအနည်းငယ်သိသာဘုရားကျောင်းများ၏အကြွင်းအကျန်ဆံ့, ထိုကဲ့သို့သော Hercules ထံအပ်နှံသည့်တစ်ဦးအဖြစ်.
2. Tivoli အီတလီ
ကျနော်တို့ Tivoli ဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုကြောင်းရောမမြို့ကနေနောက်ထပ်နေ့ခရီးများထွက်ခြင်း, ဒုတိယရာစုအေဒီအတွင်းရောမဧကရာဇ် Hadrian ၏အကြိုက်ဆုံးမြို့ထွက်ပေါက်. သူက built Hadrian ဗီလာ ဤလှပသောအနီးအနားမြို့အတွက်, ပေးသောသူရောမမြို့ရှိသူ၏နေအိမ်သို့ထက်ပိုပြီး like နှိပ်တက်အဆုံးသတ်.
အဆုံးစွန်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုအဖြစ်, Tivoli အတွက် Hadrian ဗီလာရှိပါတယ် ဥယျာဉ်နှင့်စာကြည့်တိုက်, ထိုသို့နောက်ဆုံးမှာတစ်မြို့သူ့ဟာသူဖြစ်လာခဲ့သည်. ဘုံဗိမာန်များနှင့်ဘုရားကျောင်း အဆိုပါခရီးစဉ်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစိတ်အပိုင်း, က Tivoli ရန်သင့်တစ်နေ့တာခရီးစဉ်တန်ဖိုးရှိစေမည်ဖြစ်သော.
Perugia Tivoli မှရထား
Orvieto Tivoli မှရထား
3. နေ့ Bracciano ရန်ရောမမြို့ မှစ. Trips
ရထားချွတ် Hop ရောမမြို့မှတစ်နာရီကြာကားစီးပြီးနောက်, သငျတို့သ Bracciano မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ်. ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အလယ်ခေတ်မြို့ Bracciano ရေကန်၏ကမ်းခြေပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ် ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှမြင်ကွင်းများ. ဥပမာ, သင်သွားရောက်နိုင်ပါတယ် Orsini Odesalchi Castle, အရာများစွာကိုမှူးမတ်တစ်ဦးနေထိုင်ရာခဲ့သည်.
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဒီခံ့ညားအိမ်ကြီးကိုလည်းကေတီဟုမ်းစ်အတွက် Tom Cruise နဲ့လက်ထပ်ရာအရပ်ကြီး 2006. ထို့အပြင်, Braccianos ကိုသွားလည်နိုင်ပါတယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အလယ်ခေတ်ကြိမ်အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည့်.
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသမိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုတစ်မြို့အဖြစ်, Naples သည်အတွေ့အကြုံရှာနေသူတိုင်းမဖြစ်မနေသွားလည်သင့်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် အီတလီ ရောမမြို့မှ Day Trip သွားရန်. တောင်ပေါ်က Vesuvius ၏အမြင်များ, အံ့သြဖွယ်ဗိသုကာ, နှင့်နွေးထွေးသော, ဖော်ရွေဒေသခံများ တမြို့လုံး၏အဓိက features တချို့ကိုများမှာ. သို့သျောလညျး, နေပယ်လ်ကိုလည်းအဖြစ်ကျော်ကြား ပီဇာ၏မွေးရပ်မြေ Margherita. ပိုကဘာလဲ, Antica ပီဇာဆိုင်ကို PortAlba - သငျသူတို့ကပထမဦးဆုံးပီဇာကိုဖန်ဆင်းရှိရာပီဇာဆိုင်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
ရောမမြို့ကနေနေ့ခရီးများထွက်ခြင်းအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအကြံပြုချက် Florence ဖြစ်ပါသည်, တစ်ရက်ခရီးစဉ်များအတွက်အရမ်းဝေးနည်းနည်းဖြစ်ထင်ထားတဲ့. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်ပါတယ် မီးရထားကနေတဆင့်လျင်မြန်စွာလက်လှမ်း. ရုံ သမိုင်းဝင်မြင်နေ, ဗိသုကာလက်ရာမြောက်ဝိဇ္ဇာအတတ်အား Florence ၏အလယ်ဗဟိုကခရီးစဉ်ကိုတန်ဖိုးရှိစေမည်. Duomo di Firence နာမည်ကြီး Florence ဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်, အရာဿုံမြို့ဟောင်းကြည့်တင်ဆက်ပေးတယ်. ရောမမြို့ကနေတစ်ရက်ခရီးစဉ်အပေါ် Florence သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုတက်ခြုံ.
ရောမမြို့အနီးကဤအရပ်တို့ကိုအားလုံးလာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်များမှာ. သင်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောနေ့ကခရီးစဉ်ကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်အကြိုက်ဆုံးကောက်သွား. ထိုသို့လွယ်ကူသည်!
သင့်ရဲ့အီတလီစွန့်စားမှုအဘို့အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး, သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်လှုပ်ရှားမှုများစီစဉ်, နှင့် စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား အချိန်မှန်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 နေ့အီတလီနိုင်ငံ Explore ရန်ရောမမြို့ မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-rome-explore-italy%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / es ပြောင်းလဲနိုင်သည်.